Phenylpiracet को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)
/ब्लग/ग्यालरी/-Phenylpiracet को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)
प्रकाशित 09 / 12 / 2018 by ।। मा लेखियो ग्यालरी.
Phenylpiracetam नोट्रोट्रिक औषधि पिरासिटाम को एक फिनियल व्युत्पन्न हो। यसले शारीरिक प्रदर्शन बढाउँछ र चिसो र तनावको विरुद्ध सहिष्णुताको सीमा बढाउँछ। पशु अनुसन्धानले एन्टिमेननिक, एन्टीडिप्रसाद, एन्टीसीसील्लेन्टन्ट, एन्टिपिसिचिटिक, एक्सीइओलिटिक र मेमोरी बढाउने प्रभावहरूको सुझाव दिएको छ। यसलाई डिजाइनर उत्तेजक मानिन्छ र डपिंग सूचीमा छ। यो रूसको 1980s मा सैन्य प्रयोग र खेलको लागि विकसित भएको थियो।
Phenylpiracetam रासायनिक गुण
अन्य नामहरू फिनेलिप्पामाटेम
• (आरएस) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidin-1-YL) एसीटेमाड
• (±) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidin-1-YL) एसिटेमाईड
आणविक सूत्र सी 12 एच 14 एन2हे 2
बाह्य पहिचानकर्ता / डाटाबेस
CAS नम्बर 77472-70-9
युल मास 218.26 g · mol -1
यौगिकको संरचनात्मक सूत्रका दुई आइसोमरहरू छन्: एस र आर दुबै एन्टिडिडप्रेसन्टको रूपमा साइकमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। जे होस्, R-isomer अझ बलियो छ, किनभने S-form को विपरित, थप रूपमा स्मृति र बोली जस्ता कार्यहरूलाई प्रभाव पार्छ। यसले मस्तिष्कमा न्यूरल जडानहरू सक्रिय गर्दछ, आरएनए को संश्लेषण बढाउँछ, उत्तम रक्त आपूर्ति प्रदान गर्दछ। फेनिलपाइराज्टेम (फेनोट्रोपिल) को तेस्रो रूप पनि छ - एसआर। यो दुबै आइसोमरहरूको एक रेसिमिक मिश्रण हो, जसले तिनीहरूको गुणहरू संयोजन गर्दछ। वर्तमानमा, औषधिको शुद्ध आर-isomer बिक्रीको लागि उपलब्ध छैन। तसर्थ, सावधान रहनुहोस् यदि तपाइँ फेनिलपाइरिकेटामले कमजोर प्रभाव पार्दछ भने। यदि खुराक पर्याप्त छ भने, त्यसोभए यो कम्पाउन्डको एस-रूप हो। हाम्रो उत्पादनहरूमा एसआर-फार्म छ, र औषधि को सबै लाभहरु को लागी।
Phenylpiracetam सामान्य वर्णन
यो मानवमा सीएनएस, लोकोमोटर प्रणाली, खेलकुद प्रदर्शन र कुनै नोटोट्रिकको रूपमा उत्तेजित भएको छ, जसमा यो एक्सटेक्सम- 30 गुना बढी पिरासिटिम भन्दा अधिक शक्तिशाली छ। पशु अध्ययनहरू एन्टीमेटिभ, एन्टाइडप्रिन्टेंट, एन्टीसीसील्लेन्टन्ट, एन्टिपिसोचिटिक, एक्सीइओलिटिक र मेमोरी बढाउने गतिविधि देखाउँछन्।
Carphedon पाउडर फार्मेसल
केहि सानो क्लिनिकल अध्ययनहरूले कार्पडोनोनको नुस्खा र केहि encephalopathic परिस्थितियों को amelioration मा सम्भव सम्बद्ध संघहरु, जस्तै अनाज रक्त रक्तवाहकहरु, craniocerebral आघात र निश्चित प्रकार को ग्लूमा को घावहरु।
यसले बेन्जोडाइजपीन डिजाईप को अवसादजनक कार्य को उलट लेता छ, परिचालन को व्यवहार मा सुधार गर्दछ, पछि-घूर्णन नस्टिगसस कम गर्दछ, पुनरुत्थान मानेशिया को बिरुद्ध को रक्षा गर्दछ, र anticonvulsant गुण छ।
हुनसक्छ, फेनिलपायरसेटम हाम्रो समयको सब भन्दा शक्तिशाली नूट्रोपिक औषधि कहलाउन सकिन्छ। यो स्मृति विकार, बोली, वा आन्दोलन को समन्वय संग सम्बन्धित गम्भीर रोगहरु मा एक कडा प्रभाव को लागी ठीक गरीएको थियो। फेनिलपायरसेटम धेरै पटक प्रवर्धित सूत्र हो जुन सोभियत संघको पिरासेत्म भनिने पदार्थको समयदेखि नै परिचित छ। फेनिल समूहको थप प्रयोगले औषधिको फार्माकोकिनेटिक्समा सुधार गर्न योगदान पुर्‍याएको छ (उदाहरणका लागि, रगत-मस्तिष्क बाधाको माध्यमबाट अझ स्पष्ट प्रवेश), जसले यसलाई शक्तिशाली र छिटो बनाउँदछ।
फिनेलिप्पाटेमम पाउडर लाभ र खुराकहरू
क्याप्सुलमा कुनै नोटोपिन फेनोट्रोइल (फेनइलिपाज्राजेटाम) निम्न कार्य हो:
• मस्तिष्कको गतिविधिलाई सक्रिय पार्दछ;
• संज्ञानात्मक कार्यहरू सुधार;
• केन्द्रीय तंत्रिका तंत्रमा तंत्रिका आवेगहरूको टेलिभिजनको प्रकृयालाई गति प्रदान गर्दछ;
• शारीरिक प्रदर्शन बढ्छ;
• मूड सुधार गर्दछ;
• तनाव प्रतिरोध बढ्छ;
• प्रतिरक्षालाई उत्प्रेरित गर्दछ;
• आँखाहरु र रक्त परिसंचरण मा सुधार गर्दछ (विशेष रूप देखि अंगहरु);
• विरोधीमा भ्रामक र एन्जिल्सिक प्रभावहरू र अन्यहरू छन्।
पदार्थको कमीले 100 बाट प्रति दिन 250 मिलीग्राम प्रति दिन भिन्न हुन्छ, पछि 30 दिनको लागि ब्रेक बनाइन्छ। फिनिलपेराक्रेटम ले लत र निकासी लक्षणहरूको कारण छैन।
फिनेलिप्पामाटेम पाउडर - साइड इफेक्ट र contraindication
साइड इफेक्ट्स बीचको शक्तिशाली मनोमोटर आचरण पहिचान गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं4बजे पछि पदार्थ लिनुभयो भने अनिमाम हुन सक्छ, त्यसैले यो बिहान नराम्रो हुनुपर्छ। जो लोग उच्च रक्तचाप को शिकार हो, यो धेरै बढ्न सक्छ, यस मामला मा, तपाईं पदार्थ सावधानी संग लेनी चाहिए। पदार्थ को उपयोग को मुख्य contraindication व्यक्तिगत असंयम छ।
Phenylpiracetam को बारे मा समीक्षा
फेनोट्रोइल (फेनेलिपेराजेटाम) को क्याप्सुल बारे समीक्षाहरू अस्पष्ट छन्। सामान्यतया, दबाइ लिने व्यक्तिले ऊर्जाको उजुरीको अनुभव गरेको अनुभव, भिषणता, सुधारिएको नींद, मेमोरी र मूड, एकाग्रता बढ्यो। केही मानिसहरू, यसको विपरीत, दावी छ कि तिनीहरू दुलहीपन र कमजोरीको भावनाले पराजित हुन्छन्। यो दिमाग मा हुनु पर्छ कि यस्तो प्रतिक्रिया धेरै थकान, तनाव र मानसिक थकानको कारण विकास हुन्छ। यसलाई डाक्टरको नियुक्ति बिना फिनेलिपाक्र्रेमम लिने सिफारिश गरिएको छैन।
फिनेलिप्पामाटेम यो प्रभावकारी छ?
यदि डपिंग सूचीहरूमा ड्रग गरिएको सूचीबद्ध छ भने, यो व्यावहारिक छ कि यो प्रभावकारी छ मान्न। केवल यहाँ यो केवल एक निश्चित अवधि को लागि प्रभावी छ। हो, तपाईं धेरै गर्नुहुनेछ। र के2दिन पछि के हुन्छ? तलको रेखा भनेको ऊर्जा र गतिविधि सामान्य नोटोपिलमा थपिएको थियो, यदि म यो भन्न सक्छु। र नोटोपिल (त्यो पिरासेटिम) ले2हप्ता पछि कार्य गर्न सुरु गर्दछ। यसले फ्युनोट्रोइल लिने प्रभाव पार्छ, हाम्रो वास्तविक नोटोपिक प्रभाव भनेको, 14 दिनमा सुरु हुनेछ। तर उहाँप्रति तपाईले भिडिटीको 2-हप्ता चार्ज पाउनुहुनेछ। तथापि, सहिष्णुता, औषधिको लत (कुख्यात फिनेल समूह) विकसित गरिएको छ, त्यसैले यसको दीर्घकालिक प्रयोग अर्थहीन छ।
फिनेलिप्पामाटेम (कार्पडेरन) पाउडर खुट्टा, सुरक्षा, कति पिउन।
हामी विश्वास गर्छौं कि कसरी तपाईंलाई तपाईलाई "औषधि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ" भनी भनियो भने हामी यसको प्रयोग weeks हप्ता भन्दा बढीको लागि सिफारिस गर्दैनौं, यो पनि तपाईलाई थकाउछ किनभने उच्च गतिमा काम गरिरहेका न्यूरो ट्रान्समिटरहरूले। वास्तवमा, हाम्रो विचारमा, फिनोट्रोपिक एपिसोडिकली, वा २- weeks हप्ताको पाठ्यक्रम प्रयोग गरेर यसलाई "टर्बो मोड" को रूपमा व्यवहार गर्नु उत्तम हुन्छ।
नोटोप्रोलिक कार्य प्राप्त गर्न, पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, कम से कम2हप्ता भन्दा बढी पीडा आवश्यक छ। प्याकेजिङमा तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो3महिना सम्म लिइन्छ, चतुर्भरमण्डिमले यसलाई सम्झाउँछ, विशेष गरी, एक व्यापारिक चाल, यो चमत्कारको मूल्य 800 रूबलहरूको बारेमा (2014 को अन्तमा) हो। त्यसैले,3हप्ताको स्वागत:
यो प्रयोगात्मक स्थापित गरिएको छ कि एक व्यक्तिको तौलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यदि तपाईं हरेक बिहान 70० किलोग्राम भन्दा कम हुनुहुन्छ: १ ट्याब्लेट (१०० मिलीग्राम), यदि कुनै प्रभाव छैन भने, एउटा थप थप्नुहोस्, वा एकै साथ, वा २- hours घण्टामा ।
तपाईं 70 किलो भन्दा बढी हुनुहुन्छ: 1st को साथ सुरू गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईले प्राय:2वा प्रति दिन3मा स्विच गर्नु पर्छ।
Carphedon पाउडर प्रभावकारी हुन कति लामो हुन्छ?
औषधिले2कार्यहरू घटनाको दरमा छ:
१- 1- घण्टा भित्र रहरू उज्यालो, उर्जा, एकाग्रता हुन्। त्यहाँ कुनै उत्साहित छैन, तपाईं स collected्कलन र निर्धारित महसुस गर्नुहुनेछ, तर तपाईं ड्रग को प्रभाव समाप्त भएको बेलामा मात्र यो बुझ्नुहुनेछ। "सोच-गर्न-गर्न" बीचको समय ध्यानपूर्वक छोटो पारिन्छ, र यस समयमा यो उत्तम हो तपाईंले गल्तीहरू गर्नुहुन्न। भाषण अधिक छिटो हुन्छ, मँ सबै चीजको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु, तर यदि त्यहाँ अतिरिक्त कान छैन भने, त्यसपछि पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस्, कार्यक्रम, अन्तमा। अर्को धेरै चाखलाग्दो प्रभाव - म सबैलाई छिटो कुरा गर्न चाहन्छु वा तपाईं किताब यति छिटो पढ्नुहुन्छ कि तपाईं केही शब्दहरू खानुहुन्छ। खेलाडीहरू पनि खुसी छन्।
२.१-2-१ days दिन भित्र। परम्परागत नूट्रोपिक्सको सन्दर्भमा स्मृति र बुद्धिले केही सुधार गर्यो। उज्यालो फुलएचडी सपनाहरू हटाइन्छ, ताकि तपाईं "निर्देशित सपनाहरू" अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रभावको प्रतीक्षा कहिले?
२०-20० मिनेट पछि तपाईको मेटाबोलिजम (मेटाबोलिज्म) मा निर्भर गर्दछ। Nootropic प्रभाव - १०-१-60 दिन पछि।
Cabozantinib सफलता Caner उपचार मा कथा
कसरी १२ चरणमा स्टेरोइड पाउडर आपूर्तिकर्ता छनौट गर्ने
Armodafinil को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स) 8 प्रश्नहरू आफैलाई सोध्नु अघि सीटिलिस्ट्रा पाउडर लिनु अघि